Jabra J.Randall 75t, analysis nke a nnọọ gburugburu ngwaahịa | Akụkọ akụrụngwa
Jabra Elite 75t, nyocha nke ngwaahịa gbara gburugburu
Miguel Hernandez | 27/03/2021 15:00 | Ngwa, Nyocha
Anyị na-aga n'ihu nyocha ngwaahịa ọdịyo, ọkachasị isi TWS nke ụdị dị iche iche iji nye gị nhọrọ ndị ọzọ na tebụl na iji kwado nhọrọ nke ngwaahịa ga-adabara mkpa gị na akụ na ụba gị, na usoro nke ihe, ekweisi ọhụrụ na-abata na tebụl anyị.
Anyị na-ekwu maka otu ngwaahịa Jabra kacha tozuru oke, ekweisi Elite 75t, chọpụta nyocha miri emi anyị na vidiyo na unboxing zuru ezu. Anyị na-agwa gị ihe ahụmịhe anyị bụrụla ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịzụta ekweisi TWS ndị a ekwuola nke ọma.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ oge ndị ọzọ, anyị nwere vidiyo dị n'elu nke ị ga-enwe ike inwe ekele maka ibugharị ya, ohere nhazi ya na n'ezie nkọwa niile nke nyocha miri emi nke ngwaahịa a, yabụ anyị na-akwado ka ị lelee anya tupu ma ọ bụ gụọ nyocha anyị zuru ezu. Were ohere ịdenye aha na ọwa anyị, hapụ anyị ajụjụ ọ bụla na igbe igbe ma nwee ike inyere anyị aka ịnọgide na-ewetara gị ụdị ọdịnaya a, Hà emeela ka i kweta? ị pụrụ ịzụta ha na a-akpali nnọọ mmasị price na Amazon.
1 Akụrụngwa na imewe: Ọrụ na nguzogide
2 Nka na ụzụ na ụda
3 Nwere onwe na ọkwa nke njikọta
4 Ogo ọdịyo na ngwa Jabra Sound +
Akụrụngwa na imewe: Ọrụ na nguzogide
Anyị na-ekwu maka TWS ekwe ntị na ntị nwere ezigbo ọdịiche dị iche, akụkụ abịakọrọ, na-enweghị elongation n'èzí, nke ahụ na-akwado nkwado ha kpamkpam na mpe mpe akwa nke etinyere na ntị. Ha dabara nke ọma, ọ yịghị ka ọ ga-ada na ule egwuregwu anyị, mana maka nke a, ị ga-ekenye ọdụ ahụ nke kachasị dabara na ntị gị. Ha dị obere, ihe dị ka gram 5,5 maka ntị ntị ọ bụla, yana akụkụ ya agbakọtara. N'ezie, nyere plastik matte ya, anyị nwedịrị ike iche na ịdị mma dị mma, ihe dị anya site na eziokwu, ọ dị ka ngwaahịa na-eguzogide ọgwụ na ule anyị ma na-enwe obi ụtọ na ọkụ ya mgbe anyị na-eme ogologo oge.
Ibu shit dị arọ: 35 grams
Arọ ntị ntị ọ bụla: 5,5 grams
Akụkụ igbe: 62.4 x 19.4 x 16.2 mm
Agba: Nwa, isi awọ na ọla edo
Banyere ikpe ahụ, elongated and rectangular design with a lot of curves, it weighs a total of 35 grams ma nwee ihe ngosi, yana ọdụ ụgbọ USB-C n'azụ. Ọ na-eguzogide ọgwụ, mmetụta na-enye obi ụtọ na ihe mejupụtara nke na-enye anyị mmetụta dị mma. Anyị ekwesịghị ichefu na ekweisi ndị a bụ asambodo IP55, Ọ bụ ezie na ha abụghị ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, nhazi ọkwa a ga-emesi anyị obi ike ma ọ dịkarịa ala na anyị nwere ike imega ahụ n'atụghị ụjọ na anyị ga-ata ahụhụ site na ọsụsọ ma ọ bụ splas splas.
Nka na ụzụ na ụda
Anyị na-amalite na ihe dị mkpa, ụda, anyị nwere okwu bandwidth nke 20 Hz ruo 20 kHz maka ndị ọkà okwu mgbe ha na-egwu egwu na 100 Hz ruo 8 kHz n'ihe banyere ịkpọ oku na ekwentị. Maka ya, na-enye anyị ọkwọ ụgbọ ala maka igwe ntị ntị ọ bụla 6mm na ike zuru oke, ma a ga-esonyere ya igwe okwu MEMS anọ nke ahụ ga-enyere anyị aka ịkpọta ndị mmadụ n’ezoghị ọnụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma etu esi anụ oku ekwentị, ịnwere ike ịlele vidiyo ahụ, ebe anyị na-eme nyocha igwe okwu, na nkenke se na-agbachitere nke ọma ma soro ha na-akpọ, na-eche na ha nwere nchebe megide ifufe, bụ ihe a na-anabata nke ọma.
Anyị enweghị nhichapụ mkpọtụ, anyị nwere nkagbu mkpọtụ mkpọtụ nke ụdị pad ahụ zụlitere na nke a ga-adabere n'ọtụtụ etu anyị si etinye ha. Maka nke a, dịka anyị kwurula na mbụ, anyị ejirila mpempe akwụkwọ ha dị iche iche. Mgbaghara mkpọtụ na-aga nke ọma na-aga nke ọma, ọ na-egosi na ha arụ ọrụ n'akụkụ a ma ọ bụ karịa oke iji aka ụgbọ njem ọha na eze kwa ụbọchị na-enweghị oke mkparịta ụka.
Nwere onwe na ọkwa nke njikọta
Banyere batrị, anyị enweghị data akọwapụtara banyere mAh nke ekweisi ọ bụla na-ejikwa yana okwu nkwụ ụgwọ ahụ. Ee, anyị ga-emesi ya ike na ala isi nke Nchaji bụrụ nwere ndakọrịta maka wireless odori na Qi ọkọlọtọ. Maka nke ya, ọFastgba ọsọ ọsọ ga-enye anyị ohere iji nkeji iri na ise ruo nkeji iri isii nke nnwere onwe, na-ewe obere karịa elekere iji wee rụọ ọrụ zuru ezu.
Nchekwa mmekọrịta: 8 ngwaọrụ
Akporo: ihe dị ka mita 10
Maka akụkụ ya, ekele maka njikọ Bluetooth 5.0 na profaịlụ dakọtara ya, kwere nkwa obodo kwụụrụ nke 7 awa fọrọ nke nta ka agbasosi agbaso, na-agbadata ntakịrị dabere na olu kachasị anyị kenyere.
Ogo ọdịyo na ngwa Jabra Sound +
Typesdị ngwa ndị a, n'eziokwu, ọ dị m ka ọ bara uru bara uru. Via Jabra +da +, dị maka iOS na gam akporo, ị ga-enwe ike ịhazi ọtụtụ oke nke ekweisi ga-eme ka ahụmịhe gị zuru oke. Anyị si otu a rụọ ọrụ HearTrhoug Iji belata mkpọtụ ikuku, họpụta onye enyemaka olu, enwere ike ịchọọ ekweisi anyị yana mmelite niile dị na App (na vidiyo anyị ị nwere ike ịhụ ya na arụmọrụ).
Banyere ụda, Jabra Elite 75t O juru m anya na ọkwa dị elu ana-enye, nke na-ekpuchido enweghị nkwụghachi Noise nọ n'ọrụ. Agbanyeghị, akara ahụ dị oke maka mmasị m, ihe anyị nwere ike idozi na nghazi nke ngwa ahụ. N'ime ụda ndị ọzọ, ha dị ka a haziri nke ọma ma na-enye mma dị mma na ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ.
N'ikpeazụ, anyị ga-ekwu maka ọnụahịa ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta ha site na ịnye onyinye akọwapụtara site na 129 XNUMX na isi ihe dị ka ahịa dị ka Amazon ma ọ bụ weebụsaịtị nke Jabra. Maraworị na anyị na-akwado uru kacha mma maka ego. Na nke a ị nwere ekweisi maka ntakịrị oke ọnụ ahịa na-echeba arụmọrụ, ma na nkwa nke Jabra na-elekọta, mara ụwa niile maka ụdị ngwaahịa a. Agbanyeghị, iburu n'uche oge ole ha nọrọ n'ahịa, ị nwere ike ịhọrọ ndị ọzọ nwere uru dị mma maka ego ma ọ bụ ọbụlagodi mkpọtụ mkpọtụ na-arụ ọrụ.
Ihe na: 27 March nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 26 March nke 2021
Ngwa na-aga nke ọma
Nhazi na mmetụta dị adị
Ezigbo mma ọdịyo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Jabra Elite 75t, nyocha nke ngwaahịa gbara gburugburu